Ny fanandramana sy ny fanakanana botsa-by
Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja mila ny sainao ao amin'ny aterineto dia ny fiarovana sy ny fiarovana anao. Noho ny fiatrehana fandriam-pahalemana marobe, toy ny ahiahin'i Yahoo momba ny fananiham-bolo manokan'ny fanjakana, ny olana momba ny GCHQ sy ny NSA, ary koa ireo tranganà famoretana ataon'ny fanjakana, dia mila miaro tena isika. Zava-dehibe ny hanantenantsika sy hanomanana ireo zavatra tsara amin'ny fotoana mety mba hiantohana ny fiarovana an-tserasera. Tsy tokony hohadinointsika fa miaina ao anaty tontolo izay ahafahana mampiasa ny zava-drehetra ary mety hikapoka mandritra ny segondra. Ny hetsika maharikoriko dia nanjary ampahany mahazatra eo amin'ny fiainantsika, ary mila mifantoka amin'ny fiarovana antsika avy amin'ireo hery ivelany isika. Eto i Ross Barber, Semalt Mpitantana Success Successor, dia hilaza aminao ny fomba hahitana sy hitazona bota ratsy.
Inona no atao hoe bota?
Misy karazana botsika roa samihafa: bota tsara sy bota ratsy - hdd data recovery uk. Tsy mety ny milaza fa ny boka tsara dia tsy manisy ratsy ny tranokalanao, fa mamorona olana foana ny boka ratsy. Ny tombotsoan'ny botsa dia ny manatsara ny tranokalanao amin'ny tranonkalan'ny amin'ny sariohatra , ao anatin'izany ny Google, Yahoo, ary Bing..Ankoatra izay, manome tolotra tsara ho azy ireo izy ireo rehefa mametraka ny votoatinay aty amin'ny aterineto ho an'ny olona maro mifototra amin'ny teny filamatra sy fangatahana fikarohana. Na izany aza, ny boka ratsy dia mety manimba ny tranokalanao amin'ny ankapobeny. Ampiasaina amin'ny fomba samihafa izy ireo, ary ny hackers dia mametraka tranokala ho an'ny vaovao izay mety hampiasain'ireo mpifaninana aminao. Ankoatr'izay, ireo boka ratsy dia mamorona fanafihana an-dalam-pandrosoana ary afaka mangalatra na mamerina ny votoatin'ny tranonkala, mamorona kopia izany ao amin'ny aterineto. Ny fifamoivoizana findramam-pifamoivoizana dia vokatry ny sakana ratsy rehetra, manosika sy manova ny mombamomba ny tranokalanao. Ny bota ratsy dia mety hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranonkalanao , saingy mitombo koa ny haingam-pandeha sy ny sigara. Na inona na inona karazana botso, dia tokony hesorinao izy roa mba hampihenana ny mety hisamborana anao amin'ny Internet.
Ahoana no ahafahanao mamantatra sy manakana azy ireo?
Azonao atao ny mamantatra sy misoroka botsotra tsara sy ratsy amin'ny fametrahana plugins mifanentana, fitaovana ary fanitarana. Tokony hiantehitra amin'ny fampiantranoana sy ny mpamatsy entana ianao ary hikaroka ireo fomba fanao mahomby hanesorana azy ireo. Alohan'ny hanaovana na inona na inona, dia tsy maintsy mametraka fandaharana ianao mba handinihana raha tsara na ratsy ny bot, ary ahoana no hisorohana izany ao anatin'ny minitra vitsy. Ny tatitra avy amin'i CMSWire dia manambara fa maherin'ny 70 isan-jato izany dia azo esorina miaraka amin'ireo teknika fanoherana toy ny adiresy IP mivadika sy ny fanafihana ambany onenana.
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra hanesorana ny bôtô dia ny fanakanana ny adiresy IP amin'ny bots rehetra, na tsara na ratsy izany. Tsy maintsy mijery ny karazana bot ianao alohan'ny hanaovana asa ianao. Ampiasao ireo torolàlana amin'ny tranonkala mba hanakanana azy ireo. Azonao atao ny manakana adiresy IP maro araka izay tianao, arakaraka ny fijerinao sy ny fanombantombanao. Ataovy izay hahazoana antoka fa tsy manakana ny adiresy IP an'ny olona ianao satria mety hanimba ny lazanao ao amin'ny tranonkala izany.